December 2020 - समृद्ध नेपाल
ब्रश गर्दा पेटमा छिर्‍यो ब्रश, डाक्टरले यसरी बचाए ज्यान !
भारतको महाराष्ट्र राज्यको औरंगावादमा एक हैरान गर्ने घटना सार्वजनिक भएको छ। औरंगावादका एक ३२ वर्षीय युवक विजय जनार्धन जाधव २६ डिसेम्बरको बिहान ब्रश गरिरहेका थिए। अचानक ब्रश उनको पेटमा छिर्यो। ब्रश पेटमा गएपछि उनलाई पेट दुख्ने समस्या भयो। निकै पेट दुखेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। समाचार अनुसार साधारण एक्स रे गर्दा
रीमा विश्वकर्मा सिंगल हुँदैमा मरिँदैन !
अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मा अभिनयभन्दा पनि कार्यक्रम उद्घोषणको कारणले चर्चामा छिन् । रियालटी शो नेपाल आइडल र कमेडी च्याम्पियन उनले उद्घोषण गर्दै आएकी छन् ।फिल्म र म्यूजिक भिडियोमा पनि काम गर्दै आएकी उनी अभिनित फिल्म मिस्टर नेपाली केही पहिले रिलिज भएको थियो । तर उनले अभिनय भन्दा बढी चर्चा रियालटीशोबाट पाउने गरेकी छन् अभिनय होस् वा
गायक सुनिल गिरी तनहुँको मानहुँकोटमा प्रेमिकासँग मायामा यसरी लुटपुटिए !
लोकप्रिय लोकपप गायक सुनिल गिरी र गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको नयाँ गीत दिउँला माया तिमीलाईको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । दिउँला माया तिमीलाईसोल्टिनीको भाग २हो ।तनहुँको चर्चित पर्यटकीय स्थल मानहुँकोटमा छायांकन गरिएको भिडियोमा सुनिल र उर्मिला गुरुङको रोमान्टिक प्रेम कथालाई देखाइएको भिडियो रिलिज गरिएको १दिनमा नै ट्रेण्डिगंमा पर्न सफल भएको छ । यो समाचार
आज पनि घट्यो सुनचाँदीको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? जान्नुहोस
आज घट्यो सुनचाँदीको भाउ कतिमा हुँदैछ कारोबार काठमाडौं । आज सुनचाँदीको भाउ तोलामा १००रुपैयाँले घटेर कारोबार भइरहेको छ । हिंजाे सुनको भाउ प्रतितोला ९४हजार २ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा १००रुपैयाँले घटेको हो नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको भाउ तोलामा ९४ हजार १सय कायम गरिएको छ भने तेजावी सुनको भाउ ९३हजार ६सय
लेदर ज्याकेट हो कि होइन, कसरी थाहा पाउने?
सामान्यतया बजारमा दुई हजारदेखि दस-बाह्र हजार रूपैयाँका लेदर ज्याकेट पाइन्छ। हामी वा व्यापारीले लेदर भने पनि ती ज्याकेट साँच्चै लेदर हो कि होइन हामी भेउ पाउँदैनौं। हामी अनजान भएकै कारण कति व्यापारीले लेदर नै हो भनेर धेरै मूल्य समेत लिन्छन्।उसो भए खास लेदर कसरी चिन्ने? ओरिजिनल वा मिसावट लेदर ज्याकेट कसरी थाहा पाउन सकिन्छ यो
बोल्ड अबतारमा देखिइन् अदिती !
नायिका अदिती बुढाथोकीको पहिलो चलचित्र कृ हाे । उक्त चलचित्रबाट नेपाली सिनेमा जगतमा निकै चर्चा चुलियाे । पछिल्लाे समयमा पनि बलिउडमा संघर्ष गरिरहेकि छिन् । यसैक्रममा उनको चर्चा भारतीय मिडियामा समेत हुन थालेका छन् केहि पहिला एबिपी न्युज नामक एक भारतीय अनलाइन मिडियाले उनको नाम सन्नी लियोनीसँग जोड्दै चर्चा गरेको थियाे । एबिपीले सन्नी लियोनी
मलेसियाबाट नेपाल एयरलाइन्सले ल्यायो कोरोना संक्रमित यात्रु !
मलेसियाबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सले बुधबार कोरोना पोजिटिभ भएका एक यात्रुलाई काठमाडौं ल्याएको छ । १सय ४५यात्रु लिएर आएको विमानले रिपोर्ट पोजिटिभ भएका रौतहटका एक युवालाई ल्याएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागको हेल्थ डेस्कमा जाँच गर्ने क्रममा उनले रिपोर्ट पोजिटिभ देखाएका थिए जहाज चढ्नु ७२घण्टाअघि कोरोना परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएको यात्रु मात्रै जहाजमा चढाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
छिमेकी महिलासँग सम्बन्ध राख्न बनाए सुरुङ !
एक बिवाहित पुरुषले एक बिवाहित छिमेकी महिलासँग सम्बन्ध राख्न आफ्नो घरदेखि ती महिलाको कोठासम्म सुरुङ बनाएको खुलासा भएको छ। छिमेकी महिलासँग प्रेम भएपछि ती पुरुषले सो सुरुङमार्फत त्यहाँ जाने गरेका थिएजब ती बिवाहित महिलाका श्रीमान घरबाट बाहिर निस्कन्थे प्रेमी सुरुङबाट ती महिलाको कोठामा पुग्थे।यो घटना मेक्सीकोको हो। डेलिमेलका अनुसार अल्बर्टो नामका ती पुरुषले सुरुङ बनाएको
नेकपा खाता रोक्का !
सत्तारुढ दल नेकपा विभाजनसँगै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले तत्कालीन नेकपा एमालेको नाममा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको छ। पार्टी एकता भए पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी नामका खाता अलग–अलग संचालनमा थिए प्रचण्ड–माधव पक्षका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले दुवै अध्यक्ष प्रचण्ड माधव नेपालले हस्ताक्षर गरेर पत्राचार भएको जानकारी दिए।तत्कालीन एमालेको
पत्नि निकिताको जन्म दिनमा रवि लामिछानेले यसरी ब्यक्त गरे माया !
चलचित्र बिकाश बोर्डकी पूर्व अध्यक्ष निकिता पौडेलको आज जन्मदिन परेको छ । जन्मदिनको अवसरमा उनलाई बिहानैदेखि शुभकामनाको ओइरो लागेको छ । निकितलाई सबैभन्दा पहिलो शुभकामना उनका पति तथा लोकप्रिय संचारकर्मी रवि लामिछानेले दिएका हुन् रविले केक खुवाइदिँदै निकितालाई दिर्घायूको कामना गरेका हुन् रविले शुभकामना दिएसँगै निकिता निकै खुशी देखिएकी छिन् । रविले लेखेको स्टाटस यस्तो